NuRu Massage South Beach - RUBPAGE // Muviri Rub / NuRu Eotic Massage
Nuru Slide Tantra
NuRu Massage Maodzanyemba Gungwa
Ndiri musikana weFlorida kuburikidza nekupfuura. Ini ndakazvarwa kunze kweMiami, ndikatamira kuSouth Beach nevamwe vashoma vevasikana vangu makore maviri apfuura. Ini ndinonyatsoda kugara chaiko pamahombekombe, uye ndichitarisa kuvira kwezuva mhiri kweAtlantic Ocean. Icho ndechimwe chezvinhu zvekudanana zvakanyanya. Kutaura nezverudo, ini ndinoda kuve wined uye kudya, asi ini handifarire chero mhando yekuzvipira kwenguva refu. Parizvino, ini ndinongoda kurarama hupenyu kuzere.
Ini ndinoda kushandira yekuperekedza seFort Lauderdale ine huwandu hwevanhu vanouya kuzouya kuzomabhizinesi uye kuzororo uye izvi zvinondipa mukana wekusangana nevanhu vatsva. Ini ndinorota yekufamba nyika uye kugona kutaura nevanhu vanogara kutenderera pasirese zvinoita kuti zvive nyore kuziva kuti ndekupi kwandinoda kuenda rimwe zuva.
Kutsvaga Eotic Massage
Kana zvasvika pakuita zvekukwiza erotic maMiami vasikana vanozviita zvakanyanya. Shamwari dzangu neni takatora kirasi pamwechete. NURU kukwiza muviri ndeimwe yemassage inokwezva zvakanyanya nekuti inosanganisira mafuta nemuviri wese, muviri wangu. Kutsvedza mubhainiini nekuzora mutengi pasi chingave chimwe chezvinhu zvangu zvandinoda kuita uye ndine rombo rakanaka rekudaidza iri kuti basa rangu!
Handinyari nemuviri wangu. Ndiri kufara kuzviratidza uye izvi zvinogona kutungamira kunguva dzinonakidza kana tiri pamwe chete. Ndingafarire kukupa bonyora uye ndikubatsire kuzorora. Ndinoziva kuti ndiri kuita basa rangu kana vatengi vangu vachinyemwerera pachiso chavo - uye izvi ndizvo zvandinovimba kuzadzisa newe. Fonera izvozvi uye isu vaviri tinogona kunakidzwa.
Ndiri munhu anonyanya kurovedza muviri. Ndine simba, ndinoshanda nesimba kuchengetedza muviri wangu, uye ndinotarisa zvandinodya. Kunyangwe zvese izvi, hapana chinhu chiri nani pane kuruma mune muto cheeseburger pano neapo. Shamwari dzangu dzinogara dzichiseka kuti ini ndinogona kudya zvakanyanya - uye iwe uri mune yekunakidzwa kana iwe uchida kuziva nezve foodie chiitiko muMiami. Hapana chimwe chandinoda kunze kwekukuratidza padhuze netaundi rekumba kwedu ndotaura nezvenzvimbo dzakanakisa dzekuenda.
Kanganwa nezvekuva wega - ndingafarire kushandisa imwe nguva newe. Hazvina basa kuti uri ani kana kuti une makore mangani. Mune mawonero angu, zera ingori nhamba. Vamwe vanhu vanotarisa kwandiri uye vanofunga kuti ane makore makumi maviri nemashanu-ekuberekwa anogona kunge asingazive zvakawanda nezve pasirese. Ndakave nerombo rakanaka rekufamba, uye ndinogara ndichitsvaga kusangana nevanhu vatsva. Dzimwe shamwari dzangu dzepamwoyo dzakura makore akati wandei kupfuura ini - uye izvi hazvindinetse kamwe.
Tsvaga Chii Chaunotarisira neE Escort muMiami Beach
Paunenge uchipedza nguva nevanoperekedza Fort Lauderdale inzvimbo yakanaka kuve. Izvi zvinodaro nekuti pane zvakawanda zvekuita kumusoro-uye-pasi kumahombekombe eAtlantic. Ini ndinoziva nezve zvakawanda zvakanaka zvinhu zvekuita, uye izvi zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kukuvaraidza.
Paunenge uchida kuperekedzwa seMiami Beach mahotera anofara kutigarisa. Unogona kusarudza chero nzvimbo pamhenderekedzo yegungwa, uye ini ndinogona kushanyira masikati kana husiku. Izvi zvinotipa mukana wekuva nenzvimbo yekutamba. Ndinogona kukupa unoshamisa NURU kukwiza muviri izvo zvinozorodza mhasuru dzako uye nekuona kuti une nguva isingakanganwike. Fona izvozvi timbofara!
Miami Gungwa, FL, USA